Kuphela li-10% ye-antivirus kwi-Android efumanisa zonke iinkqubo ezinobungozi | I-Androidsis
Kuphela yi-10% ye-antivirus kwi-Android efumanisa zonke ii -apps ezinobungozi
Ukhuseleko lwe-Android ngumba ontsonkothileyo, evelisa iindaba ezininzi. Sihlala sibona ukuba ezinye i-malware ziyakwazi ukungena kwiGoogle Play ngokusebenzisa iinkqubo ezinobungozi, ezinokubangela iingxaki ezininzi. Ngelixa abasebenzisi baneendlela ze khangela ukuba kukho izicelo ezinobungozi kwi-smartphone yakho. Enye indlela yokwenza oku yi-antivirus, onokuthi ukhusele ngayo umnxeba ngalo lonke ixesha kwinto eyenzekayo.
Nangona abasebenzisi abaninzi be-Android bengasebenzisi i-antivirus. Ngokukodwa kuba kucingelwa ukuba sele zikhona izixhobo kwinkqubo, kunjani Play Khusela ezisebenza njengokhuseleko. Kodwa kwabo basebenzisa i-antivirus kwifowuni, kubonakala ngathi ayizizo zonke ezisebenza ngeyona ndlela ifanelekileyo. Ubuncinci ngokokufunda okutsha.
Ngeli thuba, i-AV Comparatives ibisoloko ijongene nokuhlalutya i-antivirus ekhoyo ye-Android namhlanje. Kule studio, ungabona ntoni apha, I-250 ye-antivirus eyahlukileyo yahlalutywa. Ezi ntsholongwane ziye zavezwa kwizicelo ezosulelekileyo ezingama-2.000, ukuze kufunwe ukuba kufunyanwe ukuba zeziphi ezizezona zisebenza ngokumalunga noku, xa kufunyanwa iintsholongwane okanye ii-malware ezikhoyo kuzo.
Ngaphandle kwamathandabuzo, isifundo esinomdla kakhulu, esinceda abasebenzisi be-Android. Nangona iziphumo ngokuqinisekileyo ziya kumangalisa ngaphezulu kwesinye. Ukusukela kuphela i-80 ye-250 ye-antivirus eyahlalutywayo yafumanisa i-30% yezisongelo. Kuphela yi-10% ye-antivirus kuvavanyo abanokwazi ukuyifumana yonke. Ke kukho umahluko omkhulu kule ngqiqo phakathi komnye nomnye. Yintoni ebalulekileyo ukugcina engqondweni.
Kuba kukho abasebenzisi abane-antivirus kwifowuni yabo ye-Android, ayikhuseli ngendlela efanele. Kuyamangalisa ukuba inani eliphantsi kangaka le-antivirus linakho ukufumanisa zonke izoyikiso, ubuncinci ezo zichaziweyo kolu phando. Ngokukodwa kuba kulindeleke ukuba i-antivirus unenqanaba lokufumanisa ubuncinci i-90%. Ngokukodwa namhlanje nazo zonke izixhobo ezikhoyo.
Iimvavanyo zenziwe kwiimodeli ezimbini, njengoko besetshilo oko kusenziwa isifundo. I-Galaxy S9 ene-Android Oreo kwaye enye yayiyi-Nexus 5. Kwimeko yakhe nge-Android Marshmallow 6.0 njengenkqubo yokusebenza. Ukuze uvavanye ii -apps ezingasebenzi kakuhle kwiinguqulelo ezintsha zenkqubo yokusebenza. Ii-antiviruses zifakwe kwisakhelo esizisebenzelayo, esivumela ukusebenza kwayo yonke imisebenzi yayo. Ukongeza ekusebenziseni i-WiFi, ukuze iinkonzo zokuhlalutya kwilifu elifanayo nazo zisebenze.
Iimvavanyo bezifana ngawo onke amaxesha. I-APK enesifo ikhutshelwe kwifowuni, yafakwa kwaye yaqhutywa. Kwakukho ixesha elaneleyo lokuba i-antivirus ibenakho ukufumanisa isoyikiso ekuthethwa ngaso, ukongeza ekwaziseni umsebenzisi. Nangona oku bekungachanekanga ngokupheleleyo kuzo zonke iimeko. Kuba yi-10% kuphela ye-antivirus ekwazileyo ukubona zonke ezi zoyikiso. Ngelixa isibini kwisithathu sinenqanaba lokufumanisa elingaphantsi kwama-30%.
Abo banamanqaku aphezulu kolu phononongo bebenjalo AVG, Avira, Avast, Bitdefender, Kaspersky Lab okanye ESET, phakathi kwabanye. Ke kukho ezinye i-antivirus ezaziwayo zabasebenzisi be-Android, ezaziwayo ukuba zikhusela kakuhle. Into ekufuneka ngokuqinisekileyo ikhethe enye ibe lula. Kuba uyazi ukuba ezi antivirus ziya kukunika ukusebenza okuhle ngalo lonke ixesha, uzingela zonke izoyikiso, nkqu nezangoku.
Ngaphandle kwamathandabuzo, sisifundo esibaluleke kakhulu, ecacisa imeko yezokhuseleko kwi-Android. Kulabo basebenzise i-antivirus kwifowuni yabo, lixesha lokuba baqwalasele ukuba yeyiphi oyisebenzisayo. Kuba kunokwenzeka ukuba basebenzise enye engazukubanika ukhuseleko olwaneleyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Khu seleko » Kuphela yi-10% ye-antivirus kwi-Android efumanisa zonke ii -apps ezinobungozi
IVsmart ilungiselela ukungena eSpain kule nyanga
Baleka kwaye utsibe kwihlabathi elimnyama nelimhlophe elinamakhoboka kwi-GRIT Platform Runner yokulutha